के क्रिश्चियन बन्नु अपराध हो? :: जगदीश पोखरेल :: Setopati
के क्रिश्चियन बन्नु अपराध हो?
यो देश हल्ला, गाली र तालीले चलेको देश हो। यहाँ सबैलाई ताली खानु परेको छ, त्यसका लागि गालीबाहेक अरु गर्ने उपाय कसैसँग छैन । यहाँ कांग्रेसले माओबादीको बिरोध गर्छ, माओबादीले कांग्रेस/एमालेको बिरोध गर्छ, गणतन्त्रबादीले राजाबादीको उछित्तो काढ़छन्, राजावादीले गणतन्त्रवादीको । बाहुनबादी बाहुनले दलित जनजातिलाई मान्छे गन्दैन, कतिपय जनजातिले बाहुन क्षेत्रीको रगत चाट्छु भन्दै हिँड्छन्।आफूलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै बिनाप्रमाण तितो बचन गरिहाल्नु पर्ने त हामी नेपालीको प्रमुख संस्कार झैं बनेको छ।
यसैक्रममा कतिपय जानेबुझेका जस्ता लाग्ने व्यक्तिहरुले पनि नेपालका क्रिश्चियनहरु प्रति निकै नै कायरतापूर्ण तर्कहरु गरेर आफैंलाई राम्रो लेखक प्रमाणित गराउने चेष्टा गरेको बेलाबखतमा देख्ने गरिन्छ।वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ काम भन्दा सयौं गुणा बढी कुरा हुन्छन् र त आजसम्म देश पश्चगमनको अवस्थामा छ।
बिश्व इतिहास साक्षी छ: संसारमा आफ्नो धर्म प्रचार प्रसार नगर्ने कुनै पनि धर्म छैन। हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, इसाई अनि अरु बाँकी सबैले नै कुनै न कुनै कालखण्डमा आफ्नो आफ्नो धर्म प्रचार गरेकै हुन्।
आज अमेरिका र युरोपमा पनि इस्लाम तथा हिन्दू धर्म फैलिइरहेको छ। अमेरिकाको हरेक स्टेटमा कम्तीमा एउटा मस्जिद छ। भोलि अमेरिकामै हरेक स्टेटमा एउटा एउटा मन्दिर बन्यो भने पनि कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ। त्यसो भयो भने के त्यहाँका अमेरिकनहरुले पनि मन्दिर बढ्यो भनेर हुँदा नहुँदा गन्थन गरेर बस्लान त ? पक्कै बस्दैनन्, किनकि उनीहरु हामीझैं गफ हानेर खाना पचाउने काम गर्दैनन्।
नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेझैं काम भन्दा कुरा बढी गरिने देशमा नै स्वदेशी धर्म, बिदेशी धर्म, यो जात, उ जात भनेर नौटंकी रचिन्छ। होइन भने यूरोप/अमेरिकाले किन हिन्दु वा इस्लाम वा बौद्ध धर्म मान्नेहरुलाई पनि निशर्त आफ्नो देशको नागरिक स्वीकार गर्दछ? अमेरिकनहरुले पनि हामीले जस्तै संकीर्ण सोच राखेको भए फिलिपिन्स, नाइजेरिया जस्ता मध्यम स्तरिय क्रिश्चियन बाहुल्य देशहरुबाट मात्रै डिभी चिठ्ठामार्फत मानिसहरु भित्र्याएको भए हुदैनथ्यो र ? तर पनि आज किन डिभी मार्फत अमेरिका जान चाहनेहरुको ठुलो ठुलो भिड लाग्नेमा चाहिं बंगलादेश, नेपाल जस्ता देशहरु पर्दछन् ?
के हामीले क्रिश्चियनहरुलाई विदेशी धर्म मानेको भनिरहँदा आँफुले दौरासुरुवाल, गुन्यूचोली वा आफ्नो जातीय पोशाक लगाइराखेका छौं? के हामीले प्रयोग गर्ने घडी, मोटरसाइकल, कम्प्युटर, हवाइजहाज सबै स्वदेशी उत्पादन हो? के सबकासब वैज्ञानिक आविष्कारहरु हाम्रै पेवा हुन्?
कुनै पनि मान्छे जन्मँदै यो धर्मको भनेर फिक्स भएर जन्मेको हुँदैन। यो स्वतन्त्रताको संसार हो, जो कसैले पनि जुनसुकै धर्म छान्न सक्दछ। यसलाई छेकबार गर्न खोज्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो।
जहाँसम्म बिदेशी पैसाकै बलमा धर्मप्रचार गरियो भन्ने आरोप छ, त्यो एक आधारहीन कुरो हो। बिदेशीको पैसा क्रिश्चियनहरुको चर्चमा त परेको होला ल, त्यो मान्न सकिन्छ। तर हामी सबैले बुझेको तर नबुझेको झैं गरेको कुरा के हो भने विदेशी पैसा त हामीले अघि भर्खर खानामा हालेको नुनमा पनि परेको छ। बिहान गाडी चढेर हिँडेको बाटोमा पनि परेको छ। यहाँका सबकासब राजनीतिक दलमा पनि परेको छ। कर्णालीमा भोकमरी लाग्दा बाँडिने पिठोमा पनि विदेशीको पैसा परेको छ। अब के यी सबैलाई बिदेशीको पैसा परेको भनेर बिटुलो मान्ने?
चाइनाको लसुन र भारतको प्याज नभई हाम्रो भान्सा तात्दैन। अरबको खाडीमा नगई हाम्रो चुलो बल्दैन। नेपाली उत्पादनले हाम्रो इज्जत जान्छ। युरोप / अमेरिका जानलाईजायजेथा बेचेर पनि ज्यानको बाजी लगाउन तम्सिन्छौँ हामी। जबसम्म समग्र देशको प्रगति हुँदैन तबसम्म यो अवस्था रहि नै रहन्छ। यो अवस्था क्रिश्चियन वा हिन्दु वा मुस्लिम मात्रको नभएर यो देशभित्र जन्मने अधिकांश नेपाली नागरिकहरुको यथार्थ धरातल हो।
दक्षिण कोरियाको चर्चहरुले कसैको पनि पैसा लिंदैनन तर धेरैलाई सहयोग पुर्याउछन किनकि त्यहाँका मान्छेहरु सक्षम छन्। उनीहरुलाई अरुको पैसा लिनु आवस्यक नै छैन। त्यस्तै नेपालका पनि केहि चर्चहरुले त कुनै पनि अर्थमा बिदेशीको पैसा नलिने भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। उनीहरु आफैंमा निर्भर छन्।
अधिकांश लेखहरुमा हिन्दु राष्ट्र मासेर धर्म निरपेक्षता ल्याउनुको मुख्य दोष क्रिश्चियनहरुलाई लगाएको भेटिन्छ। यसमा चाहिं हामी क्रिश्चियनहरु खुसी नै हुनुपर्छ होला, किनकि हामीले गर्दै नगरेको कामको जस पाइराखेका छौं। हिन्दु राष्ट्र हुँदाको बखत पनि क्रिश्चियनहरुले हामीलाई धर्म निरपेक्षता चाहियो भनेर कुनै नारा, जुलुस, बन्द हड्ताल वा अन्य कुनै दवाबका कामहरु गरेको मलाई थाहा छैन।
हामी राम्ररि जान्दछौं: हिन्दु राष्ट्र वा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कुनैले पनि सडकमा सुतेको सडक बालकको जाडो छेक्दैन, जाजरकोटमा झाडापखाला लागेर मर्न आँटेको मान्छेलाई निको गराउदैन, अरबको खाडीको चरम गर्मीमा पसिनाको धारा बगाइराखेका हाम्रा दाजुभाइहरुको पसिना पुछ्दैन। हामी त खालि स्वतन्त्रताको पक्षपाति हौँ, नकि हिन्दु राष्ट्र वा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको। नेपालको धर्म निरपेक्षता भनेको धार्मिक खोल ओढेको राजनीतिक मुद्दा हो। यसमा नता क्रिश्चियनको नता बुद्दिश्टको नता मुस्लिमहरुको नै हात छ।
यसो भन्दैमा हामी धर्म निरपेक्षता चाहदैनौं भन्ने पनि होइन, धर्म निरपेक्षता लोकतन्त्रको एउटा सर्बमान्य खम्बा हो। अमेरिका, बेलायत, भारत जस्ता प्रजातन्त्रका जननी मानिने मुलुकहरु धर्मनिरपेक्ष मुलुकहरु हुन्।
यतिबेला यहाँहरुमध्ये कतिले सोचिसक्नुभयो होला: धर्मनिरपेक्ष भनेर के अर्थ? अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त बाइबलमा हात राखेर सपथ खान्छन त! यो कुरा सत्य नै हो कि अमेरिकाका राष्ट्रपतिले बाइबलमा हात राखेर नै सपथ खान्छन। तर हामीले बुझ्न जरुरि कुरो के हो भने अमेरिकाको कानुनले कुनै मुस्लिम वा हिन्दु राष्ट्रपति भएको खण्डमा उनीहरुलाई कुरान वा गीतामा हात राखेर सपथ ग्रहण गर्नबाट रोक्दैन। हालसालै एकजना इन्डियन मुलका अमेरिकन न्यायाधीशले गीतामा हात राखेर सपथ ग्रहण गरेको त हामीले सुनेकै हौँ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रले पनि बहुसंख्यक समुदायको बिशेष सम्मान गर्न सक्दछ। अमेरिकामा क्रिश्चियनहरुको बाहुल्य छ त्यसैले त्यहाँका कतिवटा कुराहरु आफैं क्रिश्चियानिटीतर्फ ढल्कन्छन्। नेपालमा हिन्दुहरुको बाहुल्य छ त्यसैले यस देशका धेरै पक्षहरु स्वत: हिन्दुजस्तै बन्छन्। राष्ट्रपति क्रिसमस वा इदको कुनै समारोहमा सहभागी हुँदैनन् तर भोटो जात्रामा सहभागी हुन्छन्, दशैंमा सामुहिक टिकाटाला लगाईदिन्छन्। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको गेटमा हिन्दु देवी देवताका मूर्ति राखिएका छन्, हिन्दु चाडपर्वहरुमा धेरै दिन बिदा हुन्छ, मन्दिरहरुले बर्षेनी सरकारी कोषबाट रकम प्राप्त गर्दछन। हिन्दुहरुलाई एउटा धर्मनिरपेक्ष देशले यहाँ भन्दा बढी के गर्नुपर्यो? बहुसंख्यकको कदर गर्ने भनेको यही होइन र? तर यति हुँदा हुँदै पनि संबिधान नै आफ्नै नाममा लेखिनुपर्ने भन्नु त अतिवादी सोच भएन र?
गल्ति मान्छेबाट नै हुन्छ, निश्चय नै क्रिश्चियनहरु बाट पनि कति गल्ति भएका होलान। गल्ति, कमीकमजोरी रहित त पक्कै पनि हिन्दु समुदाय पनि छैन। त्यसैले सबैमा मेरो अनुरोध छ कसैको पनि एकोहोरो बिरोध नगर्नुहोला। आउनुहोस हामी मिलेर गुण र दोषको आधारमा समर्थन वा बिरोध गर्ने सभ्य परिपाटीको बिकास गराऔँ। हामीले गरेका गल्ति छन् भने तोकेर देखाउनुस, हामी तिनीहरुलाई सच्याउन तयार छौं। तर यो देशमा चर्च खुल्न नै नहुने, क्रिश्चियन बढ्न नै नहुने भन्ने तालिवानी शैलीको एकलकांटे प्रवृतिलाई चाहिं हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं। धन्यवाद!
प्रकाशित मिति: 2013-11-04 09:22:26